एउटै गोत्रमा बिबाह किन गरिदैन् ? जानि राख्नुहाेस् कारण ।
यो समाचार पढ्नुहोस् मन परे सेयर गर्नुहोस, मन नपरे कमेण्टमा भन्नुहोस । गोत्र शब्दको अर्थ हो बंश/कुल । गोत्र प्रणालीको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि ब्यक्तिको प्रचीनतम ब्यक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । उदाहरणको लागि कुनै पनि ब्यक्तिको गोत्र भरद्वाज हो भने त्यस्को अर्थ हो है त्यो ब्यक्तिको बंश वैदिक ऋषि भरद्वाजबाट शुरु भएको हो । अर्थात त्यो ब्यक्तिको जन्म ऋषि भरद्वाजको पीढीमा भएको हो । तपाइँलाई एकै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने चलनबारे तपाइँलाई थाहै होला । तर किन हुन्छ त यस्तो विवाद किन हुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह गर्न ? विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप सप्त ऋषिको नामले चिनिन्छन् । यसमा आठौं ऋषि अगस्तिका सन्तान ‘गौत्र’ भनेर चिनिन्छन् । विवाहमा गोत्रको ठूलो महत्व छ । पुराणमा उल्लेख गरिएको छ कि यदि कुनै कन्या सहगोत्री छिन् भने उनीसँग विवाह गर्ने अनुमति जतिसुकै प्रेम भएपनि दिनु हुँदैन । विवाह छिन्ने समयमा गोत्रमात्र नभएर प्रवरको समेत ख्याल गर्नु पर्छ । प्रवर पनि ऋषिको नाम अनुसार फरक फरक हुन्छ । गोत्रको सम्बन्ध रगतले निर्धारण गरेको छ भने प्रवरको सम्बन्ध भने अध्यात्मले । मत्यस्य पुराणका अनुसार ब्राह्मणको साथमा सहगोत्रीको विवाह भयो भने अनिष्ठ हुने उल्लेख छ । धर्मसूत्रमा भनिएको छ ‘संगौत्राय दुहितरेव प्रयच्छेत्’ अर्थात समान गोत्रका पुरुषलाई कन्या दिनु हुँदैन । असमान गोत्रीयसँग
डा.साहेव ! चुनाव लडने की पिडितको बेदना पनि सुन्ने ?
विराटनगर । बिराटनगरमा सञ्चालित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा.सुनिल शर्मा अहिले मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन । उनले आफनो क्षेत्रका गाँउगाँउमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि चलाईरहेका छन । तर उनकै हस्पिटलबाट पिडित बनेका एक ब्यत्तिले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर क्षतिपुर्ति माग गरेका छन । विराटनगरका पत्रकार पवन साहले आफ्नी श्रीमतीको उपचारमा नोवेल अस्पतालले लापरबाही गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । विराटनगरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै साहले शर्मा सञ्चालक रहेको नोवेलले आफ्नी पत्नी सन्जु साहलाई प्रसूतिका लागि सामान्य अवस्थामै भर्ना गराएको भए पनि लापरबाहीले गर्दा चारपटक अपरेसन गराएको र बच्चाको मृत्यु भएको बताउँदै अस्पताललाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलन गर्दै पिडित श्रीमतीका साथ पत्रकार पवन शाह पत्रकार सम्मेलनमा पीडितका पति पवनले अस्पतालको लापरबाहीका कारण सामान्य अवस्थाकी आफ्नी पत्नी सन्जुलाई अहिले गम्भीर अवस्थामा घरमा राख्नु परेको दुखेसो पोखेका छन् । उनले पत्नीलाई बिरामी अवस्थामै अस्पतालले जबर्जस्ती डिस्चार्ज गराएर घर पठाएको बताउँदै भर्खर जन्मेको छोराको समेत मृत्यु भएको आरोप लगाए । साहले आफू सचेत नागरिक भए पनि बोल्न सक्ने हुँदा पनि नोवेल अस्पतालले अन्यायमा पारेकोे गुनासो गरे । उनले उपचारमा विभिन्न छुट गर्ने भनिए पनि पत्नीकै उपचारमा मात्र ७ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्नु परेको दाबी गरे । श्रीमती
बुटवल, कात्तिक ११ । पछिल्लो समय फैलिदै गएको डेंगु रोगका कारण अत्याधीक रुपमा बढेको रगतको मागलाई मध्यनजर गर्दैे मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडमी बुटवल उपमहानगर कमिटिले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार बुटवल उपमहानगरपालिका १२ तामन गर चोकमा आयोजना गरीएको कार्यक्रममा ४ महिला सहित ७७ जनाले रक्तदान गरेको एकेडेमीले जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिबराज सुबेदीले डेंगु रोगले महामारीको रुप लिन सक्ने भन्दै स्थानियलाई सचेत रहन आग्रह गरे । उनले बुटवलमा रगतको माग अत्याधीक बढेकाले एकेडेमीले आह्वान गरेको रक्तदान कार्यक्रम सकारात्मक भएको पनि बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल स्वयम् सेवी रक्तदाता समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्णचौहान क्षेत्रीले बुटवलमा रगतको अभाब हुन नदिन आफुहरु लागी परेको बताए । ऐकेडेमीका बुटवल सदस्य एवम् बुउमनपा–१२ का ईन्चार्ज तथा कार्यक्रम संयोजक किशोर सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमा बुटवल– १२ का वडाध्यक्ष दुर्गा सुबेदी, एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य गुरुप्रसाद शर्माको समेत उपस्थीती रहेको थियो । ऐकेडेमीका बुटवल उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष बिकासजंग बस्नेतको स्वागत तथा सचिव नवसुजित भण्डारीको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो । रक्तदानको प्राविधिक सहयोग रक्तसञ्चार केन्द्र, बुटवलले गरेको थियो ।
किन मानिस निदाएकै बेला प्राण जान्छ ? याे पढ्नुहाेस् अनि सेयर गर्नुहाेस् ।
विख्यात अमेरिकी फिल्म शृंखला ‘स्टार वार्स’की अभिनेत्री क्यारी फिसरको निधनको मुख्य कारण ‘स्लिप एप्निया’ रहेको चिकित्सकहरूले पुष्टि गरेका छन्। निदाएका बेला सास रोकिनुलाई डाक्टरी भाषामा ‘स्लिप एप्निया’ भनिन्छ । निदाएका बेला कैयौंपल्ट केही सेकेन्डका लागि सास फेर्न रोकिन्छ। ६० बर्सकी फिसरको गत वर्ष डिसेम्बर २७ मा निधन भएको थियो । जनवरीमा जारी मृत्युको प्रमाणपत्रमा उनको निधन हृदयघातबाट भएको उल्लेख गरिएको भए पनि चिकित्सकहरूले निधनको सही कारण पत्ता लगाउन सकेका थिएनन्। अहिले आएर लस एन्जल्सका एक जना चिकित्सकले स्लिप एप्नियासँगै मुटुसम्बन्धी रोग र लागुऔषध प्रयोगले फिसरको निधन भएको बताएका छन । निदाएका बेला घाँटीका मांसपेशी र सफ्ट टिस्युज खुम्चिएर आरामको मुद्रामा आउँछन् र सास रोकिन्छ । यसरी १० सेकेन्ड वा त्यसभन्दा बढी समय सास रोकिए त्यसलाई स्लिप एप्निया भनिन्छ । अधिकांश मानिस सुतेका बेला केही सेकेन्ड सास रोकिनु सामान्य हो। यसैकारण सुतेका बेला बारम्बार निद्राबाट ब्युँझिनु अधिकांशको समस्या हो । यसबाट अन्य समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छन् । तर धेरै समय जस्तो कि एक मिनेट नै सास रोकियो भने यसले ज्यानै पनि जान सक्छ। कुनै कुनै यस्तो केसमा यो समस्या मस्तिष्कसँग जोडिएको हुन्छ । जतिबेला मस्तिष्कले सुतेका बेला सास फेर्दा प्रयोग हुने मांसपेशीलाई सञ्चालित हुन कुनै संकेत वा आदेश दिँदैन। स्लिप एप्नियाका कारणले मस्तिष्कमा अक्सिजनको कमी हुन्छ र मस्तिष्कले हामीलाई गहिरो
लभको चक्करले वर्षमा एक करोड ६० लाख किशोरीकाे गर्भपतन !
डा.बालकृष्ण साह तथ्यांकहरुले देखाउँछन्, हामीकहाँ असुरक्षित गर्भपतन बढ्दो छ । यसमा पनि किशोरीहरुको गर्भपतन, जो अविवाहित छन् । अनिच्छित गर्भधारणपछि धेरैले गर्भपतनको विकल्प अपनाउने गरेका छन् । त्यसमा किशोरीको संख्या अधिक छ । यस्तो किन पनि भइरहेको छ भने हामीकहाँ गर्भपतनलाई १२ वर्षयता कानूनी मान्यता छ । यसले कानूनी झण्झट निम्त्याउँदैन । यद्यपि, स्वास्थ्यमा ? स्वास्थ्यको हकमा भने गर्भपतनले अनेकौं शारीरिक समस्या निम्त्याउन सक्छ । गर्भपतनको प्रक्रिया सामान्यतया गर्भको बच्चा बाहिर निकालिएमा बचाउन नसकिने अवस्थामा नै गर्भको अन्त्य गर्नुलाई गर्भपतन भनिन्छ । यस हिसाबले विकसित मुलुकहरुमा २० साता र विकासोन्मुख देशहरुमा २२ सातासम्मको गर्भ अन्त्य गरिनुलाई गर्भपतन भनिन्छ । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले अवधिभन्दा पनि तौल पाँच सय ग्रामभन्दा कम भएको अवस्थामा गर्भ तुहाउनु वा तुहिनुलाई गर्भपतन भनेको छ । डब्लूएचओको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख देशहरुमा प्रतिएक हजार महिला (१५-४५ वर्ष) मा २९ ले गर्भपतन गर्छन् भने विकसित मुलुकमा यो संख्या २४ छ । नेपालमा यसको अवस्था अलिक फरक छ । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार प्रतिएक हजार महिलामा गर्भपतन गराउनेको संख्या ४२ छ र यो संख्या हरेक विकास क्षेत्रमा फरक-फरक छ । सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चलमा ५९, पूर्वाञ्चलमा ३९, पश्चिमाञ्चलमा ३२, मध्यपश्चिममा २७ र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम २१ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । किशोरीमा गर्भपतन पछिल्लो समयमा किशोरावस्थामा गर्भपतन रोज्ने क्रम बढ्दो छ ।
आज विश्व दृष्टि दिवस, दृष्टि बिशेषज्ञद्धारा सरकारी उदासिनताको बिरोध
टक्कर न्युज संवाददाता, असोज २६, बुटवल । आँखा स्वास्थ्य सबैका लागि, दृष्टिको महत्व बुझौ, भन्ने नाराका साथ आज नेपाल सहित संसारैभर विश्व दृष्टि दिवस मनाइएको छ । सन् १९९९ फेब्रुअरीमा दृष्टि २०२० कार्यक्रमको घोषणा गरी हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहीबारलाई विश्व दृष्टि दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । दृष्टि दिवसको अवसरमा नेपाल दृष्टि बिशेषज्ञ संघ प्रदेश नम्बर ५ ले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि नेपाल लगायत बिश्वभर रहेको न्यून दृष्टि र दृष्टिबिहिनताको समस्याको बारेमा जानकारी गराएको छ । कार्यक्रममा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघका सचिव डा. प्रभात जिसिले आखा रोग र उपचारको क्षेत्रका नेपाल सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए । आँखा निकै संवेदनसिल ज्ञानेन्द्रिय हुदा हुदै पनि यसमा हुनसक्ने संक्रमण रोकथाममा सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनको आरोप छ । विश्वमा २८ करोड ५० लाख जनसख्या न्यून दृष्टि र ३ करोड ९० लाख मानिस दृष्टिबिहिन छन । सन १९८० र ८१ यता दृष्टि समस्याको बारेमा कुनै सर्बेहरु समेत हुन नसक्दा नेपालमा आँखा रोगको वास्तबिक अबस्था पनि एकिन हुन सकेको छैन । समान्य जनचेतनाको अभावका करण न्यून दृष्टि र दृष्टिबिहिनताको समस्या प्रत्येक बर्ष २० प्रतिसतले बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमध्ये अधिकांस समस्या मोतियाबिन्दुका कारणले हुने गरेको छ । नेपालमा हुने ६५ प्रतिसत न्यून दृष्टि र ८० प्रतिसत अन्धोपन
खसीको मासु भन्दै बाख्राको मासु बेचेपछि पक्राउ (फोटोसहित)
इटहरी । उपभोक्तालाई खसीको भन्दै बाख्राका मासु बेच्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका मासु पसलमा बाख्राको मासु मिसावट गरेर बिक्री हुँदै आएको गुनासोका आधारमा निगरानी बढाइएको थियो । सोही अनुरुप इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी र सञ्चारकर्मीको पहलमा खसीको मासुमा बाख्रा मिसाउने इटहरी १७ पकलीका १७ बर्षीय आप्ताज मियाँ ३० केजी बाख्राको मासुसहित पक्राउ परेका हुन । पक्राउ परेका मियाँ पकलीस्थित उनको घरबाट बाख्रा काटेर इटहरीका बिभिन्न मासु पसलमा डेलिभरी गदैं आएका थिए । उनलाई इटहरी ६ स्थित बसपार्क छिर्ने सडकमा नाम नराखिएको दुईवटा मासु पसलबाट प्रहरीले बिहान पक्राउ गरेको हो । मियाँ सोही पसल सञ्चालकका छोरा हुन् । चाडपर्वको समयमा खसीको मासु अत्याधिक बिक्री हुने गरेको मौकाको फाइदा उठाउँदै यस्तो हेलचेक्राई हुने गरेको पाइएको छ । पक्राउ परेका मियाँका अनुसार केजीको दुई सयदेखि तीनसय सम्म बाख्रा जिउँदो खरिद गर्ने गरेको बताए । उनले बिहान बाख्रा काटेर पसलमा उक्त मासु खसीमा मिसाएर बिक्री गर्ने गरेको बताए । प्रहरीले बरामद गरेको मासुमा बाख्राको थुन काटेर फालेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । मियाँका अनुसार कतिपय बाख्रा मरेको पनि आफुहरुले खरिद गर्ने गरेको बताए । इटहरीमा यस्तो घटना पहिलो पटक प्रमाणसहित फेला परेको स्थानिय उपभोक्ताहरुले दाबी गरेका छन् । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कडा कारबाहीकोे माग गरेका छन् । प्रशासनले यस्ता पसलको समय
बुटवलबाट नगद अभियान शुरु, पौडेलले थाले फलफूलको सट्टा नगद बाँड्ने अभियान
टक्कर न्युज,बुटवल, २० असोज । बुटवलका युवा अभियन्ता मुक्तिराज पौडलले बुटवलबाट नँया अभियानको शुरुवात गरेका छन । संघंस्थाहरुले स्थापना दिवसमा फलफूल वितरणको साटो गरिब विपन्न विरामीहरुलाई नगद नै सहयोग गर्ने उनले अभियान शुरुवात गरेका हुन । पैसा अभावमा रहेका विरामीहरुलाई थोरै भएपनि नगद नै वितरण गर्दा त्यो प्रभावकारी हुने भएकाले आफुले रकम हस्तान्तरण गरेको बताएका छन् । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बिच लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका ४५ जना विरामीहरुलाई दुई सय ५० का दरले नगद वितरण गरेका छन । विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि उनले अभियान थालेका छन । यो अभियानले अन्यलाइ पनि नया अभियान थालनी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले अबको चरणको निशानामा चौतर्फी भ्रष्टहरु पर्ने बताएका छन् । डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । “आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित प्रमुखदेखि अर्बौं भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्का लगायत चिनिएका भ्रष्टहरुलाई राजनीतिक दलहरुले दिएको संरक्षणले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई झनै बढावा दिएको छ । सञ्चार माध्यममा प्रमाणसहित भ्रष्टाचारका विवरण आउँदा पनि सरकारले बर्खास्त नगर्नु र अख्तियारले समेत छानविन नगर्नुले निरपेक्ष दण्डहीनता सिर्जना गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्रिवि पदाधिकारीहरुको चर्को अनियमिताबारे दर्जनौं उजुरीहरु पर्दासमेत अख्तियारले छानविन अघि नबढाउनुले पनि संवैधानिक निकायको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तो चौतर्फी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता पनि हाम्रो अभियानको अबको चरणको निशाना बन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।” यस्तो छ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति आदरणीय पत्रकार मित्रहरु मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारका लागि हामीले लामो अभियान चलाउँदै आएका छौं । त्यस क्रममा सरकारले बारम्बार हामीसित सम्झौता गर्ने तर तिनको कार्यान्वयन गर्नुको उल्टो तिनको उल्टो हुने गरी काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसैबीच हामी सत्याग्रहकै बेला चिकित्साा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेर विगतमा बारम्बार भएका सम्झौताहरु, माथेमा प्रतिवेदन र सरकारको बारम्बारको प्रतिबद्धताका बाबजुद त्रिवि कार्यकारी परिषदका पदाधिकारीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै खाली रहेको एउटा आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजका
कोरियामा एक तिहाइ मृत्यु सुतेकै अवस्थामा
काठमाडौं- रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका कामदारको निधन सुतेकै अवस्थामा हुने गरेको तथ्य खुलेको छ । पछिल्लो समयमा कोरियामा आत्महत्याका घटना बढिरहेको बेला ठूलो संख्याका कामदार मृत्युको कारण समेत खुल्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चार वर्ष कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासमा श्रम सहचारीको रूपमा काम गरी केही महिनाअघि सेवानिवृत्त भएका अनिलकुमार गुरुङले कोरियामा नेपाली कामदारको बढ्दो मृत्युको कारणबारे गरेको अध्ययनमा उक्त तथ्य फेला परेको हो । ‘रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका नेपालीको निधन सुतेकै अवस्थामा हुने गरेको छ,’ गुरुङले भने, ‘बेलुका राम्रोसँग सुतेको मान्छे बिहान मृत फेला पर्नुको कारण अत्यधिक मदिरा सेवन हो ।’ वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०१७ को आठ महिनामा १६ जना निधन हुँदा चारजनाले आत्महत्या गरेका थिए भने चारजना सुतेको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । पछिल्लो आठ महिनामा कार्यस्थल दुर्घटनामा चारजनाको निधन हुँदा तीनजनाको मृत्युको कारण खुलेको छैन । एक जनाको मात्रै स्वाभाविक मृत्यु भएको शाखाले जनाएको छ । रोजगारीका लागि कोरिया पुगेकामध्ये धेरै मृत्यु (३० प्रतिशत) सुतेकै अवस्थामा हुने गरेको छ । सुतेकै अवस्थाको निधनपछि २८ प्रतिशतले आत्महत्या गरेका छन् । मृत्युको तेस्रो कारण कार्यस्थल दुर्घटनामा १६ प्रतिशत, बिरामी भइकन १५ र सडक दुर्घटनाबाट सात प्रतिशतले ज्यान गुमाएको पाइएको गुरुङले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । रोजगारीका लागि कोरिया पुगेकामध्ये सन् २००७ यता